IIMIDLALO EZI-15 EZIGQIBELELEYO ZOKUGQIBELA ZEFANTASY ZIBEKWE NGOKWEEMETA CRITICS - IMIDLALO
Iimidlalo ezi-15 ezigqibeleleyo zokugqibela zeFantasy zibekwe ngokweeMeta Critics
Ubumnandi bokugqibela ayilogama litsha ukuba unxulumana nehlabathi elidlala inyathelo. Ingxilimbela yomdlalo odumileyo
Ubumnandi bokugqibela ayilogama litsha ukuba unxulumana nehlabathi elidlala inyathelo. Umdlalo wokugqibela wokudlala obalaseleyo ubukho ngaphezu komnyaka wesilivere. I-Final Fantasy ngowona mdlalo we-iconic kwiindidi ezahlukeneyo zokudlala indima eziphuhliswe yi-Square kunye ne-Square Enix okwangoku kwaye ziza kuluhlu lwemidlalo exatyiswe kakhulu kule minyaka ilishumi.
Umdlalo wokuqala wefranchise wakhutshwa ngonyaka we-1987 eJapan kwaye ukuza kuthi ga ngoku, ilungelo lokudlala liphuhlise ezinye izihloko ezili-14 ezinomdla kwiintlobo ezininzi. Ingeniso yomdlalo yothuse imboni yezemidlalo ngamanani amakhulu afumana umvuzo kwaye ukuba sithetha ngamanani ingeniso yomdlalo iyonke ukuza kuthi ga ngoku iyi- $ 10.9 yezigidigidi. Kuhambo lweminyaka engama-30, iMidlalo yokuGqibela yokuQaphela iphumelele indawo emangalisayo.
Kwi-2020 inkampani yenze ukukhutshwa kwayo kokugqibela kweFantasy Vii Remake nge-10th ka-Epreli 2020 kodwa ukuba sithetha ngobukho bayo okoko kwasekuqaleni iFantasy yaguqula ishishini lokudlala kwaye yabhala impumelelo entle enokuba sisizathu sokuba kutheni isigebenga somdlalo sitsale ngempumelelo abaphulaphuli kwihlabathi liphela kwaye benze ubukho bayo obunomdla beminyaka engama-30 nangaphezulu. I-90% yeGamers ithathela ingqalelo umdlalo wokugqibela weFantasy njengomlutha.
Ukuza kwinxalenye yokudlala umdlalo ngamnye uyile ngokuqaqambileyo nangokuyilayo ukuba akukho namnye umdlalo onokuthiwa ungaphantsi kothelekiso kodwa ukudideka kuqala xa umdlalo ngamnye unika ukhuphiswano olunzima. Umdlalo ngamnye ulungile kodwa yeyiphi eya kuba yeyona ilungileyo ukuqala nayo? Ukuba ufuna impendulo ungakhathazeki emva kokunikezela ngeenkcukacha ezisisiseko malunga nayo yonke imidlalo esikuzisele yona imidlalo ekhethiweyo yeFantasy engayi kukudanisa nangayiphi na indlela qhubeka ufunda…
Imidlalo yokuGqibela yokuBekwa ngokuGqityiweyo ngabaGxeki beMeta
I-10 ephezulu ibekwe kwiMidlalo yokuGqibela yeFantasy
1.iFinal Fantasy IX (94%)
2.iFinal Fantasy VII (92%)
3. UFinal Fantasy VI (92%)
4.iFinal Fantasy XII (92%)
5. Inqaku lokugqibela X (92%)
6. UFinal Fantasy VIII (90%)
7. UFinal Fantasy IV (89%)
8. UFinal Fantasy XIV: Ukuzalwa ngokutsha (86%)
9.Ifantasy yokugqibela V (85%)
I-Final Fantasy XV (85%)
Indlela Umdlali omnye, abadlali abaninzi
Iqonga Playstation, Microsoft Windows, iOS, Android, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Tshintsha
Umshicileli I-JP / i-EU: isikwere, i-NA: ubuGcisa be-Elektroniki, i-WW: i-Square Enix.
Umhla okhutshiweyo Julayi 7, 2000
Ikhutshwe ngokusesikweni ngonyaka ka-2000, ifantasy yokugqibela IX ngumdlalo odlala indima odlalwa ngumdlalo ophuhliswe yi-Square. Lo ngu-9thedition kunye nenye yeenguqulelo zokudlala eziphambili zolu chungechunge. umdlalo waphuhliswa ngesikwere esineenkqubo zokulwa zexesha elisebenzayo. Ibali lomdlalo lijikeleza kwimimandla yexesha lakudala elibizwa ngokuba nguGaia olona mlinganiswa uphambili sisizwe sikaZidane.
Kumdlalo, ukwinjongo yokuxhwila inkosazana entle yaseAlexandria eyaziwa ngokuba yiGarnet Till Alexandros XVII. UZidane ulilungu leqela lomdlalo weqonga we-tantalus. Ngexesha lokudlala umdlalo, imeko ethile engaqhelekanga iza phambi kukaZidane apho urhulumente waseGaia angaba semngciphekweni kungoko uxanduva luwela emagxeni kaZidane okusindisa urhulumente nokukhusela imishini yakhe kwangaxeshanye.
Umdlalo ukhokelwa nguHiroyuki Ito kwaye uveliswe nguShinji Hashimoto kunye noHironobu Sakaguchi. Ekuqaleni, umdlalo wakhutshwa kwisikhululo sokudlala kodwa kamva, wakhutshwa kwakhona ngeWindows Via steam, IOS, kunye ne-android Kwaye kwakhona kwiXBOX, PS4, kwaye iphinde yafakwa kwakhona kwiwindows 10.
2. Ifantasy yokugqibela V
Iqonga Super Famicom, PlayStation, Game Boy Advance, iOS, Android, Microsoft Windows
Umhla okhutshiweyo Nge-6 kaDisemba ngo-1992
Kukhutshwa ngokusesikweni ngomhla we-6thNgoDisemba 1992 Ifantasy yokugqibela v sisiqingatha sesihlanu sefransi yokugqibela yamaphupha. Inguqulelo iphuhliswa sisikwere co Ltd kunye nesoftware yematriki ye-IOS kunye ne-Android. Olu lolunye umdlalo wokugqibela onomdla kumdlalo odlala indima. Umdlali ophambili kumdlalo nguBartz Clauser kwaye umchasi nguGilgamesh, iidemon zoRift, Exdeath.
Ibali lijolise kwiqela labane abangabaziyo kwixesha lakudala elalibabizele ndawonye ukuze bakhusele iikristal yile nto iyinyani yokwenyani. Umdlalo ubalaselisa inkqubo yomsebenzi apho abadlali banenkululeko yokukhetha imisebenzi enika amandla akhethekileyo kunye namalungelo ngexesha lokudlala. Emva koku, inkqubo yomsebenzi yaqala ukwazisa kwiinguqulelo ezizayo zefrancise yefantasy yokugqibela.
Umdlalo ukhokelwe nguHironobu Sakaguchi kwaye ubhalwe nguHironobu Sakaguchi kunye noYoshinori Kitashe. Yiyo kuphela iprojekthi yenkqubo yokonwaba yeSuper Nintendo engakhange ikhutshwe kuyo nayiphi na enye intengiso yemidlalo ngaphandle kweJapan. IFantasy yokuGqibela V irekhode i-3.5 Lakh ethengise ikopi yenguqulo yesikhululo sokudlala.
Indlela Umdlali oMnye
Iqonga Playstation, Windows, Android, iOS, Playstation 4, Nintendo Tshintsha, Xbox One
Umshicileli I-Enix yesikwere
Umhla okhutshiweyo NgoJanuwari 31, 1997
Ikhutshwe ngokusesikweni ngo-1997 olu lushicilelo lwesixhenxe lweFinal Fantasy franchise eyenziweyo kuhlobo lokudlala indima. Umlinganiswa ophambili webali yingxwabangxwaba yelifu ekwabizwa ngokuba yiKuraudo Sutoraifu kwaye umchasi onguShinra kunye noSephiroth. Umdlalo ujolise ikakhulu kwingxabano yelifu eqeshwe liqela labanqolobi kwi-mission yokunqoba inkampani yamandla ombane yaseShinra etyholwa ngokusebenzisa izixhobo ezingaphaya kwezikhokelo zomhlaba.
Ikhokelwe ngu-Yoshinori Kitashe kwaye yabhalwa ngu-Kazushige Nojima, Yoshinori Kitashe, Tetsuya Nomura. Umdlalo ekuqaleni wakhutshwa kwi-PlayStation kwaye kamva waphinda waqulunqelwa iifestile kunye namanye amaqonga afana ne-ps3, indawo yokudlala ephathekayo, i-IOS, i-XBOX, ne-Android. Umdlalo wawubetha kakhulu kwezemali. Ifantasy yokugqibela vii ngowona mdlalo uthengisa kakhulu kwi-franchise ene-12 yezigidi + zeeyunithi ezithengisiweyo ukuza kuthi ga ngoku kwaye ziza kuluhlu lweRPRPGf ephezulu kwishumi leminyaka.
Iqonga SNES, Playstation, Gameboy Kwangaphambili, Android, iOS, Windows
Umhla okhutshiweyo Epreli 2, 1994
Ikhutshwe ngokusesikweni ngonyaka we-1994 olu lushicilelo lwesithandathu kuthotho lokugqibela lwefantasy. Umlingisi ophambili webali nguTerra Branford, uCeles Chere, Megitek kunye nabahlali abangooVirroz, Kefka Pallazo. Ibali lomdlalo libonisa ukungavisisani phakathi kobukhosi kunye nababuyayo. Umlawuli unamagunya amakhulu ngelixa u-terra Branford efuna amandla okulwa. Umdlalo unika abalinganiswa abalishumi elinesine ukuba bakhethe ngexesha lokudlala ixesha elisebenzayo.
Ikhokelwe ngu-Yoshinori Kitashe no-Hiroyuki Ito kwaye yabhalwa ngu-Yoshinori Kitashe, u-Hironobu Sakaguchi. Ekuqaleni, yakhutshwa nge-SNES eJapan njengeFinal Fantasy III kodwa kamva yakhutshwa kwilizwe jikelele kwiSitishi sokuDlala, umdlalo wenkwenkwe phambili, i-IOS, i-Android kunye neefestile njengeFinal Fantasy VI. Umdlalo wawuyimpumelelo egqithileyo kwaye wabekwa kwindawo yesibini yokudlala indima ngalo lonke ixesha ngokucinga inethiwekhi yemidlalo kwi2017 kwaye ngumdibanisi wexesha elide kuthotho lokugqibela lwefantasy.
5. UFantasy wokugqibela XII: Ubudala beZodiac
Umthuthukisi I-Enix yesikwere
Iqonga I-Playstation 2, iMicrosoft yeWindows, iPlaystation 4, iNintendo Shintsha, iXbox One
Umhla okhutshiweyo 16thNgomhla wama-2006
Ikhutshwe ngokusesikweni ngo-2006 lolu lushicilelo lweshumi elinesibini lwefrancise yamaphupha endlela yokudlala indima. Iqhawe lomdlalo yi-Street Urchin Vaan kunye ne-villain nguVayne Solid okanye, uVayne Carudas Solidor.
Umdlalo ubonakalisa imimandla yeIvalice kunye nemfazwe engapheliyo phakathi kobukhosi baseArcadian kunye nobukhosi baseRozarrian kunye neDalmasca abaphakathi kwemfazwe kwaye banamathela phakathi kobukhosi beArchadian kunye neRozarrian kuba iDalmasca yoyisiwe bubukhosi beArcadian, ke, Inkosazana yaseDalmasca iphakamise imfazwe nxamnye nobukhosi beArcadian.
Ikhokelwe nguHiroyuki Ito noHiroshi Minagawa kwaye ibhalwe nguDaisuke Watanabe, Miwa Shoda, Yashumi Matsuno. Umdlalo wenzelwe okokuqala i-PlayStation 2 kwaye kamva wakhutshwa kwakhona njengenguqulelo yamanye amazwe ebizwa ngokuba yifantasy yokugqibela ye-XII inkqubo yezodiac yamazwe ngamazwe ngokwazisa utshintsho olumangalisayo emsebenzini nakubalinganiswa. Umdlalo wawuyinto entle.
6. UFantasy wokugqibela X
Umthuthukisi ICandelo loPhuhliso lweMveliso 1
Iqonga Indawo yokudlala 2
Umshicileli I-JP: Isikwere, NA: Ubugcisa be-Elektroniki besikwere, i-PAL: Ukuzonwabisa kweKhompyuter ye-Sony
Umhla okhutshiweyo NgoJulayi 19, 2001
Ikhutshwe ngokusesikweni ngo-2001, ilishumithushicilelo lwangaphambili lothotho lokugqibela lwefantasy. Ngumdlalo olinganiswe kakhulu wefranchise kunye namanqaku abagxeki be-meta ye-92%. Umdlalo ubonakalisa ezona zinto zinomdla phakathi kwayo yonke i-franchise. Iqhawe lomdlalo nguTidus kwaye umguvela nguJecht. Umdlalo uveza uTidus ongumdlali webhola opholileyo weblitz kunye no-Yuna obizwa njengommisi.
Emva kokutshatyalaliswa kwesixeko sakhe, iZanarkand yi-monster ebizwa ngokuba yi-sin Tidus ithathwa e-Spira apho ijoyina khona i-Yuna ukunqoba i-villain Sin kunye nokuzisa ubulungisa kummandla. Le gameplay isebenzisa inkqubo yedabi yokujika ngaphandle kwemfazwe esebenzayo. Umdlalo uveliswa kwaye ukhokelwa likhitshi laseYoshinori kwaye ubhalwe nguKazushige Nojima, uDaisuke Watanabe, uMotomu Toriyama.
Kuqala umdlalo wakhutshwa kwisikhululo sokudlala 2, emva koko wakhutshwa kwakhona njengefantasy X / X-2 HD remaster yePS3 kunye nePS vita emva koko yeMicrosoft Windows, iNintendo Shintsha, kunye neXbox One. Umdlalo wawubetha kakhulu kwihlabathi liphela kwaye i-Enix yesikwere yabika iikopi ezizizigidi ezi-6.6 ezithengisiweyo ezibonisa impumelelo kwihlabathi liphela phakathi kwabadlala umdlalo.
7. UFantasy wokugqibela VIII
Iqonga Playstation, Microsoft Windows, Nintendo Shintsha, Playstation 4, Xbox One
Umshicileli I-PlayStation, i-JP / i-EU: isikwere, i-Square EA, i-SCE Australia, iWindows, i-Square EA, i-Eidos Interactive, i-Square, i-Square Enix (i-Steam) i-Square Enix
Umhla okhutshiweyo NgoFebruwari 11, 1999
Ikhutshwe ngokusesikweni ngo-1999, lushicilelo lwesibhozo kuthotho lokugqibela lwefantasy. Oku kuza kuluhlu lwemidlalo enefreyithi ephezulu kunye nenqaku le-meta abagxeki abangama-90%. Lo ngomnye umdlalo wempikiswano yelungelo lokuthengisa. Eli libali lehlabathi elinomtsalane elinomdibaniso wokubandakanyeka kwezesayensi. Umlingisi ophambili womdlalo nguSquall Leonhart kunye nomntu ongathandekiyo ngu-Ultimecia.
Umdlalo ujolise ekumiselweni ukuba yimbewu yesikwele uLeonhart oqeshwe yigadi yaseBalamb kwimishini eyahlukeneyo yokunceda iqela elidumileyo eliqhelene negama lezikhova zehlathi ezisebenza nguRinoa ngentliziyo. Umdlalo uveliswa nguShinji Hashimoto kwaye ukhokelwe nguYoshinori Kitashe.
Ekuqaleni, umdlalo wakhululwa kwi-PlayStation kodwa kamva wakhululwa kwakhona kwiifestile ngonyaka ka-2000. Umdlalo wawuyinto ebabazekayo kwaye urekhode ukuthengisa okukhulu e-United States ngaphezulu kwe- $ 50 yezigidi kwiiveki ezintathu zokukhutshwa kwayo.
Amaqonga: Playstation, Umbala weWonderSwan, i-SNES, i-Gameboy Advance, iPlaystation Portable.
Umhla okhutshiweyo NgoJulayi 19, 1991
Ikhutshwe ngokusesikweni ngo-1991 lushicilelo lwesine kuthotho lokugqibela lwefantasy. Isibhozo kolu luhlu siza kuluhlu lwemidlalo enesilinganiselo kule minyaka ilishumi idlulileyo inenqaku le-meta abagxeki abangama-89%. Eli bali lokuhlengwa liyathandwa ngokubanzi ngababukeli beendawo ezahlukeneyo. Eli bali ligxile kuCecil Harvey, umkhonto omnyama apho azama ukuthintela isangoma esibi uGolbez ekufumaneni iikristali ezinamandla. Lo ngumdlalo weqonga kwaye usebenzisa idabi lexesha elisebenzayo elenza libe nomtsalane ngakumbi.
Ikhokelwe nguHironobu Sakaguchi kwaye ibhalwe nguTakashi Tokita, uHironobu Sakaguchi. Ekuqaleni, umdlalo wakhutshwa ngenkqubo yokonwaba yeSuper Nintendo ngegama lokugqibela lokugqibela II kodwa kamva, ikhutshwe kwihlabathi liphela njengephupha lokugqibela IV lePlayStation ephathekayo, i-PS, UMDLALO WABASEBENZI BANGAPHAMBILI kwaye ikwafumaneka kwinguqulo engu-3d enika okhethekileyo ubuchule kunye nokwenza ngokwezifiso ngexesha lokudlala.
Umthuthukisi ICandelo leShishini le-Enix 5
Indlela Abadlali abaninzi
Iqonga Playstation 3, Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One, Os X
Umhla okhutshiweyo UDisemba 26, 2013
Ikhutshwe ngokusesikweni ngo-2013 nolu ushicilelo lwe-14 lwefrancise yamaphupha okugqibela. I-Final Fantasy XIV iza kuluhlu lomdlalo ophakamileyo kunye namanqaku abagxeki be-86%. Kungenxa yomdlalo wabadlali abaninzi kakhulu akukho mntu uphambili ebalini.
Ibali libonisa imimandla ye-Eorzea yelizwekazi i-Hydaelyn eyahlulwe yangamandla amathathu (iGrindania isizwe samahlathi, indawo yase-Uldah yentlango, iThalassocracy yaseLimsa. igcinwe kwaye ngenxa yesoyikiso la maqela mathathu athabathe izinto ezithile eziyimfuneko.
Umdlalo uveliswa nguHiromichi Tanaka, uNaoki Yoshida, kwaye ubhalwe nguYaeko Sato. Umdlalo ukhutshwe kathathu owandisiweyo obizwa ngokuba yi-FINAL FANTASY XIV: I-HEAVENSWARD yakhutshwa nge-23 kaJuni 2015, eyesibini ebizwa ngokuba yi-FINAL FANTASY XIV STORMBLOOD ekhutshwe nge-20 kaJuni 2017, kwaye eyesithathu njenge-FINAL FANTASY XIV: I-SHADOWBRINGERS ikhutshwe nge-2 kaJulayi 2019 .
10. UFantasy wokugqibela XV
Umthuthukisi Icandelo leShishini le-Enix 2
Iqonga I-Playstation 4, i-Xbox One, iMicrosoft yeWindows, iStadia
Umhla okhutshiweyo NgoNovemba 29, 2016
Ikhutshwe ngokusesikweni ngo-2016 lolu lushicilelo lwe-15 lwefrancise yokugqibela yefantasy. Lo ngumdlalo olinganiswe kakhulu kule minyaka ilishumi ngamanqaku abagxeki be-meta angama-85%. Umlingisi ophambili webali nguNoctis Lucis Caelum kwaye umlinganiswa ongalunganga nguArdyn Izuna. Umdlalo unezahluko ezili-15.
Apho inkosana yobukumkani bukaLucis ebizwa ngokuba nguNoctis Lucis Caelum izama ukufumana itrone yakhe kwi-chancellor yasebukhosini yase-Niflheim, u-Ardyn Izunia ofuna ukubamba iikristali zobugqi zosapho lukaLucian kwaye loo nto yimishini kunye nokuzonwabisa. Umdlalo wokudlala usebenzisa inkqubo yexesha lokwenyani elisebenzayo. Umdlalo ukhutshelwe i-Xbox, i-PS4 kunye ne-PS4 Pro kodwa kamva, iphuculwe iifestile ngokunjalo.
Ulungelelwaniso lwamaxesha azo zonke iiFantasy zokugqibela G. ames kude kube ngumhla
1. Ubumnandi bokugqibela
Umthuthukisi Isikwere, i-Enix yesikwere
Indlela N / A
Iqonga Android, MSX, iOS, GBA, Windows Phone, SNES, NES, GC, Wii, DS, 3DS, Ouya, PS1, PS2, PS3, PS4, PS4, PS5, PSP, PS Vita, Microsoft Windows, Xbox 360, Xbox One, WonderSwan
Umshicileli Isikwere, i-Enix yesikwere
Umhla okhutshiweyo NgoDisemba 18, 1987
Ezinye iinguqulelo zeMidlalo N / A
Ubumnandi bokugqibela babunjalo ikhutshwe kwakhona njenge Ubumnandi bokugqibela mna sisiqalo sokuqala sefranchise epapashwe ngumdlalo omkhulu wesikwere. Eli libali ledolophu iCornelia, apho amagorha ezibane kufuneka asindise inkosazana uSara kwiGarland engendawo. Umdlalo uvumela abadlali ukuba balawule abalinganiswa abane abaziwa ngokuba ngamaQhawe okukhanya. Emva kokwenza umdlali okhethiweyo anganqumla kwimephu kwaye ajongane nomqobo ngokokukhetha abakwenzileyo.
Iqonga Playstation, Famicom, Game Boy Advance, Playstation Portable, WonderSwan Umbala, iOS, Android, Windows Ifowuni
Umhla okhutshiweyo NgoDisemba 17, 1988
Ezinye iinguqulelo zeMidlalo ye-NA
Inqaku lokugqibela II sisixa sesibini seFranchise. Ibali leFantasy yokuGqibela yesi-2 yenzeka kummandla waseFynn ophethwe bubukhosi obubi bePalamecian kwaye ubonakalisa uhambo olunomtsalane lwamalungu amancinci amane uFirion, uMaria, uLeon, uGuy asindisa imimandla evela kubaphathi ababi.
Iqonga INintendo, Famicom, Windows, Android, iOS, Playstation Portable
Umshicileli Isikwere kunye ne-Square Enix (ukuphinda kwenziwe kwakhona)
Umhla okhutshiweyo Epreli 27, 1990
Ifantasy yokugqibela 3 yiphakheji edityanisiweyo yemidlalo emibini yokuqala enoguqulo oluncinci kule. Yonke into iqala xa inyikima ivela kumqolomba weAltare apho kuvulwa khona umqolomba. Abahloli abane abancinci bangena emqolombeni kwaye bafumane iikristali ezibabonisa indlela eya kwihlabathi labo.
Final Fantasy IV lushicilelo lwesine lothotho oluluhlu lwemidlalo enesilinganiselo kakhulu kule minyaka ilishumi idlulileyo. Eli bali ligxile kuCecil Harvey, umkhonto omnyama apho azama ukuthintela isangoma esibi uGolbez ekufumaneni iikristali ezinamandla.
5. UFantasy wokugqibela V
Ifantasy yokugqibela v lunyanzelo lwesihlanu lokugqibela lokugcina umdlalo wokudlala indima. Ibali ligxile kwiqela labane abangabaziyo kwixesha lakudala elathi lababizela ndawonye ukukhusela iikristali. Umdlalo ubalaselisa inkqubo yomsebenzi apho abadlali banokukhetha khona imisebenzi ebanika amandla akhethekileyo kunye namalungelo ngexesha lokudlala.
6. UFantasy wokugqibela VI
Iqonga Playstation, SNES, Gameboy Kwangaphambili, Android, iOS, Windows
Final Fantasy VI lushicilelo lwesithandathu kuthotho lokugqibela lwefantasy. Ibali lomdlalo libonisa ukungavisisani phakathi kobukhosi kunye nababuyayo. Umlawuli unamandla amakhulu ngelixa obuyayo terra Branford efuna amandla okulwa. Umdlalo unika abalinganiswa abalishumi elinesine ukuba bakhethe ngexesha lokudlala ixesha elisebenzayo.
Final Fantasy VII Ushicilelo lwesixhenxe lwelungelo lokuthengisa elidalwe kuhlobo lokudlala indima. Umdlalo ujolise ikakhulu kwingxabano yelifu eqeshwe liqela labanqolobi kwi-mission yokunqoba inkampani yamandla ombane yaseShinra etyholwa ngokusebenzisa izixhobo ezingaphaya kwezikhokelo zomhlaba.
Ezinye iinguqulelo zeMidlalo Ekuqaleni kwakhutshwa ngonyaka we-1997, umdlalo waphinda waveliswa kwakhona nge-26thNgeyoMqungu ka-2006 ngegama elithi Final Fantasy VII: Ukutsala kweCerberus kuhlobo lomdlalo wokudlala kunye nokudubula komntu wesithathu, nasemva kokuphumelela umdlalo obuyiselwe njengeFinal Fantasy VII: Crisis Core On 13thNgoSeptemba 2007.
8. UFantasy wokugqibela VIII
Umshicileli I-PlayStation, i-Square, i-Square EA, i-SCE Australia, iWindows, i-Square EA, i-Eidos Interactive, i-Square, i-Square Enix (iStam)
Final Fantasy VIII lushicilelo lwesibhozo lokugqibela lwefantasy series eza kuluhlu lomdlalo ophakamileyo wefranchise. Umdlalo ugxile kumhlaba oza kuba yimbewu ye-squall Leonhart oqeshwe yigadi yaseBalamb kwimishini eyahlukeneyo yokunceda iqela elidumileyo eliqhelene negama lezikhova zehlathi ezisebenza nguRinoa ngentliziyo.
Ezinye iinguqulelo zeMidlalo Ufakelo lokuqala loqobo lomdlalo lwakhutshwa ngonyaka we-1999 kuhlobo olusekwe ekujikeni kweqonga lePS1 kodwa kamva ngonyaka ka-2001 umdlalo wakhutshwa kwakhona kubasebenzisi bePC ngotshintsho oluncinci. Kutshanje kwi-2019 Final Fantasy VIII-Remastered ikhutshwa nge-3 kaSeptemba 2019 kumaqonga amaninzi anjengePlaystation, iMicrosoft yeWindows, iNintendo Shintsha, iPlaystation 4, kunye neXbox One.
Umshicileli Isikwere, ubuGcisa boMbane beSikwere, i-Square Enix.
Inqaku lokugqibela IX ngumdlalo odlala indima odlalwa ngumdlalo ophuhliswe yiSikwere. Ibali lomdlalo lijikeleza kwimimandla yexesha lakudala elibizwa ngokuba nguGaia olona mlinganiswa uphambili sisizwe sikaZidane. Kumdlalo, ukwinjongo yokuxhwila inkosazana entle yaseAlexandria eyaziwa ngokuba yiGarnet Till Alexandros XVII. Le yenye yeenguqulelo zemidlalo eziphambili zoluhlu olubonisa iinkqubo ezisebenzayo zokulwa ixesha.
10. UFantasy wokugqibela X
Umshicileli Isikwere, ubuGcisa beSikwere seKhompyutha, iSon Computer Computer
Inqaku lokugqibela X lushicilelo lwangaphambili lwe-10th kuthotho lokugqibela lwefantasy. Umdlalo uveza uTidus ongumdlali webhola opholileyo weblitz kunye no-Yuna obizwa njengommisi. Emva kokutshatyalaliswa kwesixeko sakhe, iZanarkand yi-monster ebizwa ngokuba yi-sin Tidus ithathwa e-Spira apho ijoyina khona i-Yuna ukunqoba i-villain Sin kunye nokuzisa ubulungisa kummandla.
Ezinye iinguqulelo zeMidlalo Ngomhla we-19 kuJulayi ngo-2001 uQobo lokuQala lokuGqibela u-X lwasungulwa ngokukodwa kwiqonga le-Playstation 2 kodwa nge-13th ka-Matshi 2003 umdlalo wakhutshwa kwakhona njenge-Final Fantasy X-2 ku-Action-play Genre-play Genre for multiple platforms like PC, PS4, Xbox One, PS3, Tshintshela, PSVITA, PS2. Emva kwempumelelo yale midlalo mibini idlulileyo ngo-2013 iFinal Fantasy X / X-2 HD iphinde yaphinda yakhutshwa ngokuphuculwa komzobo kunye notshintsho xa kuthelekiswa nokukhutshwa ezimbini ezidlulileyo.
Umthuthukisi Isikwere kunye ne-Square Enix
Iqonga I-Playstation 2, iMicrosoft yeWindows, iXbox 360
Umshicileli I-PlayStation 2, i-Sony Computer Entertainment, iMicrosoft Windows, i-Xbox 360, isikwere kunye ne-Square Enix
Umhla okhutshiweyo Ngomhla we-16 kuMeyi 2002
Inqaku lokugqibela XI ngumdlalo wokuqala wokudlala indima edlalwayo kwi-intanethi ye-franchise eyenzeka eVanadiel. Ibali liqala xa inkosi yesithunzi esibi ibuyela kwimimandla. Uxolo lukaVanadiel emngciphekweni izikumkani ezine zibiza abalwa kunye nabaphumi-mkhosi ukuba balwe nemikhosi emibi nokukhusela uVanadiel.
12. Final Fantasy XII: Ubudala beZodiac
Umhla okhutshiweyo Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 2006
UFantasy wokugqibela XII: Ubudala beZodiac lushicilelo lweshumi elinambini lwentengiso yamaphupha endlela yokudlala indima. Umdlalo ubonakalisa imimandla yeIvalice kunye nemfazwe engapheliyo phakathi kobukhosi baseArcadian kunye nobukhosi baseRozarrian kunye neDalmasca abaphakathi kwemfazwe kwaye banamathela phakathi kobukhosi beArchadian kunye neRozarrian kuba iDalmasca yoyisiwe bubukhosi beArcadian, ke, Inkosazana yaseDalmasca iphakamise imfazwe nxamnye nobukhosi beArcadian.
Ezinye iinguqulelo zeMidlalo Ufakelo lokuqala oluphambili lomdlalo yayiyiFinal Fantasy XII Ubudala beZodiac obukhutshwe nge-16thNgomhla ka-Matshi 2006 kodwa kamva nge-26thEpreli 2007 isikwere i-Enix iphinde yakhupha ingxelo yesibini njengeFinal Fantasy XII: Amanqwanqwa oMnqophiso weqonga leNintendo DS
Iphuhliswe ngu ISebe leMveliso ye-Square Enix 1
Iqonga I-Playstation 3, i-Xbox 360, i-iOS, i-Android, iMicrosoft yeWindows
Umhla okhutshiweyo NgoDisemba 17, 2009
Ngaphantsi kwesihloko seflegi UFabula Nova Crystallis, umbono wokugqibela ngumdlalo we-adventure omanyanisiweyo okhutshwe ngo-2009. Ibali libonisa umthetho olawulayo wolawulo lukarhulumente kwilizwe elizayo leCocoon. Iqela le-adventure likwinjongo yokusindisa umhlaba kulawulo olukhohlakeleyo.
movie karen apho ubukela khona
Ezinye iinguqulelo zeMidlalo Umdlalo wakhutshwa ngezavenge ezithathu. Ufakelo lokuqala oluphambili lwe Eyokugqibela Ifantasy XIII yakhutshwa nge-17thUDisemba 2009 weqonga lePC, PS3, kunye neXBOX 360. Nge-15thNge-Disemba ka-2011, umdlalo uphinde wakhutshwa njengeFinal Fantasy XIII-2 yePC, PS3, kunye neXBOX 360, kwaye ekugqibeleni nge-26thNge-Disemba 2013 umdlalo wakhupha isavenge sokugqibela njengeFinal Fantasy XIII: umbane ubuya.
14. Final Fantasy XIV: Ukuzalwa ngokutsha
Inqaku lokugqibela XIV iza kuluhlu lomdlalo olinganiswe kakhulu kule minyaka ilishumi. Ibali libonisa imimandla ye-Eorzea yelizwekazi i-Hydaelyn eyahlulwe yangamandla amathathu (iGrindania isizwe samahlathi, indawo yase-Uldah yentlango, iThalassocracy yaseLimsa. igcinwe kwaye ngenxa yesoyikiso la maqela mathathu athabathe izinto ezithile zokuphucula ubukumkani.
15. UFantasy wokugqibela XV
Inqaku lokugqibela XV lushicilelo lwe-15 lwefranchise yokugqibela emnandi. Umdlalo uqukethe izahluko ezili-15 apho inkosana yobukumkani bukaLucis ebizwa ngokuba nguNoctis Lucis Caelum izama ukufumana itrone yakhe kwi-chancellor yasebukhosini yase-Niflheim, u-Ardyn Izunia ofuna ukuba neekristali zobugqi zosapho lakwaLucian.
1. Final Fantasy VII: Okokuqala kuluhlu lokugqibela lweFantasy VII ngokungathandabuzekiyo lolona khetho lulungileyo ukuqala ngalo ukuba usaqala kwaye ufuna ukuphonononga yonke imilinganiselo yefriji entle. I-FF VII inika umbono wayo yonke imidlalo yokudlala nazo zonke iinkcukacha ekufuneka umthandi wokugqibela womdlalo omnandi. Umdlalo unayo yonke into kwindawo enye.
2. UFantasy wokugqibela VI: Abanye abadlali badlala iFantasy Fantasy VI njengomdlalo ogqwesileyo kuyo yonke i-franchise. Olu luhlu luye lwabona imiboniso ephezulu yesisombululo etsala elona nani liphezulu labadlala umdlalo. Umculo womdlalo kunye nomxholo webali ngokungathandabuzekiyo unomdla kwaye uthathelwa ingqalelo njengeyona ilungileyo ngokwabagxeki abaphambili bemidlalo. Lo ngumdlalo olinganiswe kakhulu kwi-franchise nenani elikhulu labadlali behlabathi.
3. Final Fantasy IX: Okwesithathu kuluhlu lokugqibela lweFantasy IX ngomnye umdlalo obalulekileyo we-franchise ekufuneka udlalwe emva kweFinal Fantasy VI. Njengoko sonke sisazi ukuba umdlalo uqukethe ikristale kuninzi lweMidlalo yokuGqibela yomdlalo lo mdlalo wazisa umxholo weekristali ngokungafihlisiyo kuwo nawuphi na umdlalo wokugqibela weFantasy ukuza kuthi ga ngoku.
4.iFantasy X yokugqibela: Okwesine kuluhlu lweFantasy Fantasy X yenye yeyona nto abalandeli bayincomelayo kumdlalo wokugqibela weFantasy. UFantasy wokugqibela X ngumdlalo olinganiswe kakhulu kwaye ubambe amanqaku abagxeki be-meta angama-92%. Amangqina omdlalo abonisa umdla kwaye anezothe ezinamandla kunye neentshaba ezivela kwezinye imidlalo.
5. Ifantasy yokugqibela V: Okwesihlanu kuludwe lokuGqibela kweFantasy V ngowona mdlalo ubalaseleyo kolu luhlu kufanelekile ukuba udlalwe emva koFantasy wokuGqibela X. Umdlalo ubonakalisa abalinganiswa abomeleleyo njengoGilgamesh kunye no-X-Death. Amangqina omdlalo ngamanye amaxesha abhetele kunawo nawuphi na umdlalo kulo lonke uthotho.
6. Inqaku lokugqibela XII: Okwesithandathu kuluhlu lokugqibela lweFantasy XII ngomnye umdlalo oza emva kweFantasy yokuGqibela V.
7. Final Fantasy IV: Eyesixhenxe kuluhlu lo ngumdlalo olandelayo emva kokudlala iFinal Fantasy XII. Umdlalo uyacetyiswa sisininzi sabadlala umdlalo ngenxa yabalinganiswa bayo abenziwe ngobuqhetseba, abahlali abanobuqhetseba, umculo othandekayo, kunye nenkqubo yemfazwe enomdla.
8. Final Fantasy VIII: Isibhozo kuluhlu lokugqibela lweFantasy VIII lolunye ukhetho lomdlalo ekufuneka uludlalile emva kweFF IV. Umdlalo uqulethwe ngabalinganiswa abanomtsalane, iindawo ezisikiweyo ezipholileyo, izingoma ezimnandi, kunye nebali lothando elikhulu elinokuphela kwentliziyo okuchukumisayo.
9. Final Fantasy XIV: Okwesithoba kuluhlu olu lolunye ukhetho esilukhethileyo emva kweFinal Fantasy VIII. Njengoko sele uphonononge ezona mpawu zemidlalo izayo kulandelayo kuluhlu lokudlala.
10. UFantasy wokugqibela XV: Ishumi kuluhlu olu lolunye ukhetho olufanele ukudlalwa emva kokugqibela kweFantasy XIV. Okona kutsha kubo bonke lo mdlalo ungqina impumelelo yokugqibela yeFantasy Franchise yokugqibela.
Ukuba kwasekuqaleni uhambo olupheleleyo lweFantasy yoHlahlelo luhlalutyiweyo emva koko igrafu ehlaziyiweyo yoluhlu lukhula ngokuthandekayo. IFantasy Franchise yokugqibela irekhode impumelelo entsha kwimveliso yezemidlalo enokubonakala ngokuthandwa komdlalo. Inqaku lokugqibela leFantasy 7 likhutshwa nge-10 ka-Epreli 2020 yeqonga lePS4 elichaza ubukho obomeleleyo bemidlalo yokudlala engaphezulu kweshumi lesilivere xa kubalwa ukusuka kumhla wayo wokuqala.
Kwasekuqaleni uqobo, eminye yemidlalo ifumene amanani amnandi. Final Fantasy VII, fantasy X yokugqibela, Final Fantasy VII, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV zezinye zezona midlalo zithengiswa kakhulu kwiFinal Fantasy Franchise ngalo lonke ixesha. Ubumnandi bokugqibela butsale umdla kubadlali abaninzi abavela kwihlabathi liphela.
Imovie ezoyikisayo kwi-hulu 2016
liza kuphuma nini ixesha lesine le-dxd yesikolo esiphakamileyo
izobuya nini iclover emnyama
mangaphi amaxesha okuhamba
ukubukela phi ipaki esemazantsi emva kwehulu
re: zero anime ixesha 2